ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေ နဲ့ဒေါ်လာတွေ လက်ခံခဲ့တဲ့ရက်တွေကို မေးတဲ့အခါ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မမှတ်မိဘူးလို့ . – Yarsuthit
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေ နဲ့ဒေါ်လာတွေ လက်ခံခဲ့တဲ့ရက်တွေကို မေးတဲ့အခါ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မမှတ်မိဘူးလို့ .
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာဘ်ယူတယ်လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သိန်း နဲ့ အကယ်ဒမီအခေါက်ရွှေ (၇)ပိသာကို တွေ့ရမလားလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတွေက မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ပုံနဲ့ အသံကျယ်ကျယ်တောင် မထွက်နိုင်တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ချက်တွေကိုပဲ တရားခွင်မှာ နားထောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲ့ဒီ့နေ့က ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာ သူ့ဆီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တံစိုးလက်ဆောင်ယူတဲ့အကြောင်း ရုံးရှေ့မှာ သက်သေထွက်ဆိုဖို့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ရုံးရှေ့ကိုဝင်လာကတည်းက ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မျက်နှာကို မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး လို့ တရားခွင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
ပင်နီတိုက်ပုံနဲ့ ပုံမှန်မြင်နေကြ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမဟုတ်တော့ဘဲ သိသိသာသာပိန်ကျသွားတဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို တရားခွင်မှာ မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ထွက်ချက်တွေက တိုးလွန်းတဲ့အတွက် ရှေ့နေတွေက ကျယ်ကျယ်ပြောဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ သူဟာ နှလုံးလည်းမကောင်းသလို၊ ကိုဗစ်ကို နှစ်ခါပြန်တောင် ကူးပြီးတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်း ပြန်ရှင်းပြတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ရှေ့နေနှစ်ယောက်က သူ့အနားသွားပြီး ထွက်ချက်တွေနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။
တစ်မှုကို ထောင် ၁၅ နှစ်အထိ ချလို့ရတဲ့ အဂတိအမှု ၄ မှုနဲ့ စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုခြံနံပါတ်(၁) အထူးတရားရုံးမှာ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် က စတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်ဟာ ပထမဆုံးရက်မှာပဲ အငြင်းပွားမှုတချို့နဲ့ စပါတယ်။
တရားသူကြီးက ပထမဆုံးရုံးချိန်းမှာတင် တရားလိုကို ပြန်လှန်စစ်မေးဖို့ပြောတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေအဖွဲ့က ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒီကနေ့မှတွေ့ရတဲ့အတွက် ပြန်လှန်စစ်မေးတာမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ရှေ့နေဘက်ကတင်ပြတာကို တရားလိုတိုင်းဥပဒေအရာရှိက ကန့်ကွက်ခဲ့တာလို့ ‌ရှေ့နေတွေက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
တရားသူကြီးက ဆုံးဖြတ်ဖို့ တရားခွင်နေ ၅ မိနစ်လောက်ဆင်းသွားပြီး ပြန်တက်လာပါတယ်။’နောက်တစ်ပတ်မှပဲ ပြန်လှန်မေးခွန်းမေးပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုပြသက်သေတော့စစ်သွားမယ်’ လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သက်သေထွက်ဆိုဖို့ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းရှေ့နေတွေက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ စစ်ကောင်စီဘက်က သက်သေတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သက်သေလာထွက်ခဲ့လို့ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်တရားလိုဖြစ်တဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး ဦးရဲထက်က ဒီအမှုရဲ့ သက်သေခံတွေကို တရားသူကြီးဆီတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ နဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွေမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နေပြည်တော်ကို လာတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြနန်းဘုံသာလမ်းနေအိမ်ကို လာရောက်ခဲ့တာတွေကို လုံခြုံရေးကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်
သက်သေခံပစ္စည်းတွေထဲ စာရွက်စာတမ်းတွေဘဲတွေ့ရပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာဘ်ယူတယ်လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သိန်း နဲ့ အကယ်ဒမီအခေါက်ရွှေ (၇)ပိဿာ ကိုတော့ မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသက်သေထွက်တဲ့အခါ အသံကတိုးလွန်းနေလို့ အသံကျယ်ကျယ်ပြောဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းကတောင်းဆိုတဲ့အခါ ကျယ်ကျယ်ပြောဖို့ တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။
‘ကျယ်ကျယ်ပြောလည်း အသံကမထွက်ပါဘူး’ လို့ ဦးကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ချက်တွေကို တရားရုံးစာရေးရဲ့ လုံးကောက်မှတ်တမ်းကနေ ကွန်ပျူတာ စခရင်က တစ်ဆင့် ဖတ်ရှုခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒီအထဲ တရားလိုဘက်ကတိုင်းဥပဒေအရာရှိက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေ နဲ့ဒေါ်လာတွေ လက်ခံခဲ့တဲ့ရက်တွေကို မေးတဲ့အခါ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မမှတ်မိဘူးလို့ ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သိန်း နဲ့ အကယ်ဒမီအခေါက်ရွှေ (၇)ပိဿာ ကို သုံးကြိမ်ခွဲပြီး နေအိမ်မှာ လက်ခံရယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။’သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ထွက်ဆိုသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲ’ လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်ကပြောပါတယ်။
ဒီထွက်ချက်တွေကို ကြားခဲ့ရတဲ့သူတွေ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိနေတယ်လို့ ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက မတ်လမှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေပေးတုန်းက သူ့ရဲ့ယာဥ်မောင်း နဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိကို ကားပေါ်မှာပဲ နေစေခဲ့ပြီး သူတစ်ယောက်တည်း အိမ်ထဲဝင်ပေးခဲ့တာလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်ပဲသုံးသုံး၊ ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပဲသုံးသုံး၊ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ပဲ သုံးသုံး လိုတဲ့နေရာမှာသုံးပါဆိုပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲထည့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်’ လို့ ထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။ဒီလို ပုံစံနဲ့ သုံးကြိမ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းထဲက ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ထောက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လိုရာသုံးပါဆိုပြီး ပေးခဲ့တာလို့ ထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သိန်း နဲ့ အကယ်ဒမီအခေါက်ရွှေ (၇)ပိဿာ ဟာလည်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ဇနီးရဲ့ မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းက ပစ္စည်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့ ထွက်ဆိုချက်မှာ ပါတယ်လို့ ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ရင် သူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတောင်းခဲ့တဲ့ ထွက်ဆိုချက်မျိုးကိုမတွေ့ရပါဘူး။
အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင် ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အခါ အတု၊အစစ်ငြင်းခဲ့ကြပေမဲ့ လို့ အခုတော့ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက တရားခွင်မှာ လာထွက်ဆိုသွားတဲ့အကြောင်း ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကို လာဘ်စားတယ်တဲ့လို့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက သက်သေထွက်ခဲ့လို့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေ ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာဘ်စားတယ်ဆိုတာကို ပြည်သူအများကလည်း မယုံကြည်ကြပါဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်တုန်းက လာဘ်စားတဲ့ဝန်ကြီးတွေကို ထောင်ချမယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောခဲ့သူပါ။
စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုနဲ့ သူတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးကို အယုံအကြည်မရှိသူတွေရှိသလို ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခံထားရလို့ အခုလိုထွက်ဆိုတာလို့ နားလည်ပေးသူတွေလည်း ရှိနေပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝေဖန်ငြင်းခုန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဥပဒေရှုထောင့်ကလည်း ငြင်းခုန်စရာရှိနေတဲ့အကြောင်း ဥပဒေအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြနေကြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့သက်သေထွက်ချက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိလွတ်လပ်မှန်ကန်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ထောက်ပြမှုတွေရှိနေကြတာပါ၊” ဒါတွေက တရားသူကြီး ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ” လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လာဘ်ပေးတဲ့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို တရားမစွဲဘဲ ယူတယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲတာက ဥပဒေအမြင်အရ သဘာဝမကျတဲ့အကြောင်း ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို အမှုဖွင့်ထားပေမယ့်လို့ အဲ့ဒီအထဲ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း မပါသေးပါဘူး။
‘အဲ့ဒီအတွက် တရားလိုဘက်က သက်သေတွေပြနိုင်ရမယ်။ အခုလို ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှုတ်ထွက်စကားတစ်ခွန်းနဲ့တော့ ဘယ်ရမလဲ’ လို့ ဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရှေ့နေအဖွဲ့က ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို အပြန်အလှန်စစ်မေးတဲ့အခါ အမှုကပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ သူကသုံးသပ်ပါတယ်။